Rajada Dalkiisa Ee Koobka Aduunka & Asensio Oo Kashifay Waxa Uu Sameeyay Marka Uu Zidane Keydka Dhigo %
Da’yarka dahabiga noqday ee Marcos Asensio, ayaa wuxuu daboolka ka qaaday in mar walba oo uu Zidane, keydka uu geliyo isaga uu dib uga fikiro hadii ay jiraan waxyaabo qalad ah oo uu sameeyo iyo waliba sida uu mar walbo wax wanaagsan usameyn lahaa.
Laacibkaan oo wadanka Spain udhashay ayaa wuxuu Zidane, unoqday mid muhiim ah, isagoona xitaa kusoo bilaaba kulamada waa weyn, taasoo keentay inuu noqday mid ay la dhacaan wax qabadkiisa taageerayaasha iyo maamulka Spain.
Asensio, ayaa wuxuu sidoo kale ka hadlay rajada uu wadankiisa ka qabo koobka aduunka ee 2018, kaasoo sanadkaan ka dhici doona wadanka Ruushka wuxuuna cod dheer ku sheegay inay awood uleeyihiin inay ku guuleystaan.
“Maxaan u awoodi weynay inaan ku guuleysano?” ayuu yiri, Asensio xili uu wareysi siinayay Barnaamijka El Larguero oo ka baxay, Idaacad ku taala wadanka Spain.
“Waxaan nahay kuwa kalsooni badan ku qaba nafsadooda, waxaana wood uleenahay inaan sameyn wax walba,” ayuu hadalkiisa ku daray
Dhanka kale, mar uu ka hadlay arrinta Zidane iyo isaga ayuu yiri: “Wax badan ayaa bartaan, marka aan dheelayo kulamada waa weyn, waxaana i caawinayo cadaadiska.
“Mar walba oo aanan dheelin, waxaan isku deyaa inaan dib u fiiriyo hadii ay jiraan waxyaabo qalad ah oo aan sameeyo iyo sida aan wax fiican usameyn karo,” ayuu sii daba dhigay.
“Zidane wuxuu hadda yahay mid kalsooni badan iigu qaba aniga – Hada weerarkeena iyo daafaceena waa mid wanaagsan, waxaana dooneynaa inaan sii wadno sidaan oo kale,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay, Marcos Asensio.
Sikastaba, Marcos Asensio ayaa wuxuu hadda kamid ah yahay liiska ciyaartoyda ee wadanka Spain, kuwaasoo ciyaaraha saaxibnimo la dheeli doonta maalmaha soo aadan wadamada kala ah: Argentina iyo waliba Jarmalka.